Asus ZenScreen, obere ihuenyo ejiri USB-C | Akụkọ akụrụngwa
Asus na-aga n'ihu na-enye ndị ọkachamara ọtụtụ ọrụ na IFA, ụlọ ọrụ Taiwanese na-aga n'ihu na-egwu mkpara niile nke teknụzụ. Asus na-edobe ngwaọrụ ya nke ezigbo arụmọrụ yana ọnụ ahịa ezi uche dị na mmiri na-ejupụta na ahịa, nke mere ha ji nweta aha ọma nke ga-esi ike ịfu. Oge nke a Asus ka webatara ZenScreen, ihuenyo enwere ike ijikọ site na USB-C ma nwee ike wepụ anyị karịa otu nsogbu. Echiche nke obere ekwentị na-ada ụda nke ukwuu, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị maara na o nwere ndị ọkà okwu na nkwado azụ.
Uru nke obere ihuenyo a bụ na anyị nwere ike jikọọ ya na ngwaọrụ ọ bụla nwere USB-C, anyị makwaara na ọ bụ ihe ọhụụ na ọtụtụ laptọọpụ na ahịa. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị na ohere ndị ahụ, cheta na enwere ọtụtụ ndị na-ahụ maka UBS-C na HDMI dị na ahịa nke ga - enyere gị aka inweta ọtụtụ ihe na ZenScreen a mara mma. N'ebe ọwụwa anyanwụ 15,6-anụ ọhịa panel gosipụtara atụmatụ FullHD, karịa ihe zuru ezu maka ọtụtụ ndị ọrụ, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ mkpebi dị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ laptọọpụ niile dị elu na etiti.
Ihe ZenScreen Ọ dị 8mm n’arọ ma dịrị naanị gram 800 (ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị obere). N'ezie, o nwere onye nchebe nke n'aka nke ya na-arụ ọrụ dị ka ọdụ ụgbọ mmiri, nke ga-enyere anyị aka ịtọ ya ya ka ọ masị anyị. N'ezie, ọ bụ ngwaọrụ ọhụụ na ọnụahịa dị mma. Na Europe anyị ga-enweta ya site na 250 €. A zuru okè ọrụ enyi ma laptọọpụ na smart mbadamba, ọ bụla USB-C ga-dakọtara. Iji tinyekwuo ozi, enwere ike iji Asus ZenScreen ma ihu igwe na kwụ ọtọ, anyị ga-aga nhazi ya ka ị nweta ọtụtụ ọnọdụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Asus ZenScreen, obere ihuenyo ejiri USB-C